The Voice (6- 32 ) စာစောင်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, June 26, 2010 Links to this post
မေတ္တာသည်သာ ….. တခန်းရပ်ပြဇာတ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၆၅နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းပွဲတွင် စီစဉ်တင်ဆက်သည့်မေတ္တာသည်သာ ….. တခန်းရပ်ပြဇာတ်
MYIT TAR TI TAR from yechit on Vimeo
ပေးပို့ ပေးသော ကိုရီးယားဌာနခွဲ နှင့် မိတ်ဆွေများ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ မြန်မာ နအဖသံရုံးမှ စက်ဖြင့်ဖတ်နိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်အကြောင်းတဲ့။
ချုပ်ချယ်တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ဗလပွနဲ့နအဖက အထူးတဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေတဲ့ စက်ဖြင့်ဖတ်နိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြောင်းကို ဆော်ဒီအာရေဗျမှာရှိတဲ့ နအဖသံရုံးကနေ ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
SPDC Machine Readable Passport
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ စက်ဖြင့်ဖတ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ ထုတ်တာ ကြာလှပါပြီ။ နအဖက အခုမှ အထူအဆန်းလုပ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေကို ပြောနေတာပါ။
ကိုကျော်သူ ရဲ့ ဆည်းဆာရိပ်ရဲ့ သုခ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့နေကြသော ဂီလာန ဘိုးဘွားများအား ကြင်နာစွာဖြင့် ၎င်းတို့ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်သမျှ ကာလအပိုင်းအခြားအထိ ၎င်းတို့ အပေါ်တွင် နားလည် စာနာစိတ်၊ သည်းခံစိတ်တို့ဖြင့် ပြုစုယုယပေးနေသည့် “ဆည်းဆာရိပ်” ဂီလာနဘိုးဘွားများဧ။် ကျန်းမာရေးကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် လာရောက် စစ်ဆေးကုသ ပေးလျှက်ရှိရာ . . . ရောက်ရှိလာသော ဘိုးဘွားများအား နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဆေးခန်းမှ ဆရာဝန်များ၊ လူမှုရေးသမားများ၊ လုပ်အားပေး လူငယ်လူရွယ်များမှ နွေးထွေးကြင်နာစွာဖြင့် ကြိုဆို ဖေးမကာ ပေးဆပ်လျှက် ရှိပါကြောင်း . . . . ။
Rapper များမဟုတ်သော F.F.S.S တိုက်စစ်မှူးများ
၂၅.၆.၂၀၁၀ (သောကြာ)နေ့ နံနက် (၈း၃၀) နာရီတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၇) ရက် သားသမီးတို့၏ နာရေးကိစ္စအ၀၀ကို နေပူ မိုးရွာမရှောင် အရိုးကျေကျေ အရေခမ်းခမ်း ပေးဆပ်ရန်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူးများဖြစ်ကြသော ယာဉ်မောင်း ယာဉ်နောက်လိုက်တို့အား မိုးတွင်းကာလ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ မိုးကာ ဂျာကင်များကို ဝေငှခဲ့ပါသည်။
ဓါတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုပြီး သူတို့အား Hip Hop အဆိုတော်များ၊ Rapper များဟု မထင်စေချင်။ သူတို့သည် ပြည်သူလူထုအတွက် သူတို့တွင်ရှိသော ခွန်အား၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယအား တို့ဖြင့် ပေးဆပ်နေ ကြသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) / F.F.S.S. (Free Funeral Service Society)၏ အမာခံ ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူးများပင် ဖြစ်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ကောင်းသတင်း၊ ဂုဏ်သတင်းသည် သူတို့၏ စွမ်းဆောင်ချက်များ၊ ပေးဆပ်မှုများ၊ အနစ်နာခံမှုများ၊ ရိုးသားမှုများ၊ သီလလုံမှုများပေါ်တွင် မူတည်တော့သည်။
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေပြီ ပြန်လည်မျှဝေ ခံစားနိုင်ရန် သတင်းများကို ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်.။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းအား အာဏာပိုင်များမှ ခေါ်ယူသတိပေး ပြောဆိုမှုအပေါ် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောဆို....
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ(၁၁)ရက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြည်သူလူထုက မဲဆန္ဒပေးတာလည်း မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်သလို မဲမပေးတာလည်းပဲ မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးပဲလို့ ပြောဆို ခဲ့တဲ့အပေါ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းမှ မီဒီယာများအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ၂၅ရက်နေ့ သောကြာနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အထူးအယူခံ အမှုကိစ္စနေ့လည်(၁)နာရီမှာ တွေ့ဆုံခွင့် ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှု မပြုခင် နေ့လည် (၁၂)နာရီမှာ အာဏာပိုင်များက ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းအား အဆိုပါ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုခေါ်ယူသတိပေးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူထုခေါင်းဆောင်မှ မကျေနပ်ကြောင်း မှန်ကန်မျှတမှုမရှိ တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီကနေ (၃)နာရီအထိ ဆရာဦးကြည်ဝင်းရယ် အန်ကယ်ရယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အထူးအယူခံ အမှုကိစ္စအတွက် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တခြား ထူးထူးခြားခြား မရှိပေမယ့် ဒီနေ့အန်ကယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မတွေ့ခင်မှာ နေ့လည်(၁၂)နာရီမှာ အာဏာပိုင်တွေက အန်ကယ်ကို ခေါ်သတိပေးပါတယ်။ ပြီးခဲတဲ့ တစ်ခေါက်တွေ့တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတဲ့ ပြည်သူလူထုကို မဲဆန္ဒပေးတာလည်း မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်သလို မဲမပေးတာလည်းပဲ မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးပဲလို့ ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မီဒီယာတွေကနေ လွှင့်တော့ ဒီဟာကို အာဏာပိုင်တွေက သဘောမကျဘူး ဒီလို ဆောင်ရွက်လို့ မရဘူး အမှုအတွက်လာရင် အမှုအတွက်ပဲ ပြောဆိုပါလို့ သတိပေးပါတယ်။
ဒီလိုပြောဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပြန်လည်ပြောပြတဲ့ အခါ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မကျေနပ်ဘူး မှန်ကန်မျှတမှုမရှိ တရားမျှတမှု မရှိဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ဒီဟာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဥပဒေအရ အချက်အလက်တွေရှာပြီးတော့ Complain လုပ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခြေခံအချက်ကတော့ နံပါတ်တစ် အချက်က ရှေ့နေနဲ့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ပြောရမယ် ဆိုတာမျိုးကန့်သတ်တာ.. ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် မရှိဘူး.. နောက်တစ်ခုက အခုဒေါ်စုပြောလိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ မဲပေးခွင့် ရှိမရှိဆိုတဲ့ ကိစ္စ ...ဒါဟာ ဥပဒပညာပေး ကိစ္စ တကယ်တန်းဆိုရင် အစိုးရမှာတောင် ဒီအတွက် တာဝန်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်လို့ အဲ့လိုဒေါ်စုကပြောပါတယ်။ ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင် ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ဝီလျံ ယက်ထော နေအိမ်သို့ ဝင်ရာက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် မတရားချခံနေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဥပဒေအရ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဒီအမှုစဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမှုကိစ္စအတွက် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများနဲ့ တွေ့ခွင့်၊ ဆွေးနွေးခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ယခုတစ်ကြိမ်မှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အာဏာပိုင်များမှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရှေ့နေများအား သတိပေး ပြောဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်.။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြည်သူလူထုက မဲဆန္ဒပေးတာလည်း မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်သလို မဲမပေးတာလည်းပဲ မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးပဲလို့ ပြောဆိုတာ ပြန်ဖတ်ချင်ရင်.... http://www.demowaiyan.co.cc/2010/06/blog-post_9501.html
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, June 26, 2010 Links to this post
ဇာတ်မင်းသားလေး သိန်းစိန်.. သိန်းစိန် တိုင်းပြည်က ကလော်...... ၂၀၁၀ စင်မြင့်မှာ ပုဆိုးဝတ်ခါလေ ပေါ်လာတော့မှာ...
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က လာအို ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဘိုဝါဆွန်ဘုဖာဝမ်းအား ဝန်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်နဲ့ အဖွဲ့မှ ပိုးလုံချည် ရောင်စုံဝတ်ကာ သင်္ကြန် ယိမ်းအဖွဲ့ ပုံစံအသွင် တစ်မူထူးစွာနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်.။ ယခင်ဝတ်ဆင်နေကြ စစ်ဝတ်စုံများ ပျောက်ပြီး ပိုးလုံခြည်များနဲ့ ဘိသိတ်ဆရာဆန်ဆန်.. အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလို ပုံစံနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ ကြပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်း ပါပဲ.
ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Generals and their relatives watchers GRW စစ်အာဏာရှင်နှင့် အဆက်အနွယ်များအား စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ မှအတွင်းသိ တစ်ဦးမှ ရေးသားပြောဆိုလာပါတယ်။
ဒီလိုဝတ်ဆင်ဖို့ အတွက် အဓိက ညွှန်ကြားသူကတော့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ပါပဲ။ ဒီလိုပိုးလုံခြည်တွေ ကအနည်းဆုံး တစ်သိန်းကျော်လောက် ကနေ သုံးသိန်းအထိ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရတဲ့လစာ ဆယ်သိန်းဆိုတော့ (၁၀ပုံ တစ်ပုံပေါ့) ဒါကတော့ အမျိုးသားတွေ အတွက် ပြောတာပါ။
အနည်းဆုံး ၃သိန်းတန်တဲ့ ချိတ်ထမီတွေပါတဲ့..
သူတို့တိုင်းမှုးကတော်တွေ ဝတ်ထားတာကတော့ အနည်းဆုံး (၃)သိန်းကနေ (၇)သိန်းကျော်အထိရှိတယ်။ သူတို့ လေးလပတ် အစည်းအဝေးဆိုရင် အရာရှိကတော်တွေက ပိုးထည်တိုက်ကို ပြေးဝယ်ရပါတယ်။ ပိုးထည်တိုက်ကလည်း အရာရှိကတော်တွေကို သိနေတော့ လာဝယ်တာနဲ့ ဘယ်အိမ်ကို ပေးမှာလဲ ...အိမ်တော်ကြီး ကိုးလုံးအတွက်လား မေးပါတယ်. (အိမ်တော်ကြီး ကိုးလုံးဆိုတာ သူတို့စစ်တပ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ကိုးယောက်ပါတဲ့).။ သူတို့မှာ အရင်ဝယ်ထားတဲ့ List တွေနဲ့ အဆင်တွေက အစအကုန်ရှိတယ်လေ... ဥပမာဒါက အမေကြိုင်မှာ ရှိပြီးသား ဒါက အမေကြိုင်ကြိုက်တဲ့ အရောင် ဆိုတာကအစ သိနေတယ်လေ။ သူတို့ အများဆုံးဝယ်တာက အလံပြဘုရားလမ်းမပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မန္တလေးကလာဖွင့်ထားတဲ့ သိင်္ဂီရွှေဝါ ပိုးထည်တိုက်ဆိုင်ကပါ။
ငါနဲ့ တူသူ ငါ့ရန်သူ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်
ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်း အဘွားကြီး(ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်) ဒီနေ့ဘာဝတ်မယ်၊ ဘာအရောင် ဆိုတာကို လေးလပတ် အစည်းအဝေးမစခင် မှာ ကြိုတင်ပြီး ကတော်တွေကို အကြောင်းကြားပါတယ်။ အပြင်မထွက်ခင်မှာ အားလုံးကို အကြောင်းကြားပြီး တော့မှ ကျန်တဲ့ ကတော်တွေက မတူအောင် လိုက်ဝတ်ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဝတ်တဲ့အရောင်နဲ့ တူတာတို့ ပိုဈေးကြီးတာတို့ ဝတ်မိရင် ဒေါ်ကြိူင်ကြိုင်ရဲ့ ငြိုငြင်ခြင်းကို ခံရလို့ပါတဲ့။ အရမ်းကြောက်ရတဲ့ အတွက် မဝတ်ရဲပါဘူးတဲ့။
အရင် ကစထမှုး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင်သန်း ရာထူးကနေ ချောင်ထိုးခံရပြီး နောက်ဆုံးဖယ်ရှား ခံရတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်သန်းရဲ့ မိန်းမဒေါ်ခင်မာလာသန်းက အရင်ကတည်းက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ မိဘမျိုးရိုးက ဆင်းသက်လာတာရယ် ဝတ်တတ်၊ စားတတ်တာရယ်ကြောင့် တန်ဖိုးကြီးတာတွေ ဝတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်ဆုံး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ ငြိုငြင်တာကို ခံလိုက်ရတာပါတဲ့။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ဟာ မာန်မာန ကြီးမားခက်ထန်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့ကို ပြိုင်ဆိုင်တယ်ထင်ရင် ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။ သူတို့ရတဲ့ လခနဲ့အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ တွက်ခိုင်းရင် မျက်စိလည်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူတွေမှာတော့ စားဝတ်နေရေးကို လုံးပန်းနေရတဲ့ အတွက် ဝတ်ဖို့ဆိုတာက နောက်ဆုံးအဆင့်မှာပါ..။ ဒါကတော့ GRW ကပေးပို့လာတဲ့ အထဲက ဒီသတင်းပုံတွေနဲ့ ဆိုင်တာကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ (ကျန်တဲ့ စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်း တွေရဲ့ အကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်)။
ဓာတ်ပုံများ ကိုနစ်နေမန်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မြန်မာ့လူပုလေး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ပြိုင်လို သူ၏လှုပ်ရှားမှုရုပ်သံမြင်ကွင်း
မြန်မာပြည်တွင်း၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကြိုတင်အခွန်ပေးဆောင်ပြီးမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်..
၂၀၁၀နှစ်ပိုင်းကစပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်လုပ်သူတွေရော သက်တမ်းတိုးသူတွေပါ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ပါမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီရဲ့ အကူအညီပူးပေါင်းမှုနှင့် အခွန်ကင်းလွတ်တိမ်းရှောင်မှု လျော့နည်းပပျောက်ပြီး ကြွေးကျန်တွေရဖို့အတွက် အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ပါမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးတာ၊ သက်တမ်းတိုးပေးတာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းအသစ်လုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့လည်း ရှေ့နှစ် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကြိုတင်ခွန်ပေးဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ခွန်ဆောင်တဲ့အခါ အမြတ်အစွန်းကို ခန့်မှန်းပေးသွင်းနိုင်ပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကိုတော့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း ပေးသွင်းရမှာပါ။ ကြိုတင်ခွန်ကို အရစ်ကျစနစ်နဲ့ သုံးလတစ်ကြိမ်၊ ခြောက်လတစ်ကြိမ် စသည်ဖြင့် ခွဲပြီးပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွေမှာ အခွန်ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားပါမှ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ စီမံရေးရာမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်ဆောင်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတိုင်း လိုင်စင်ယူရတဲ့ လုပ်ငန်းအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ အခွန်ဆောင်ရာမှာ အမြတ်ခွန်နဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် နှစ်မျိုးပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ တချို့လုပ်ငန်းတွေက အမြတ်ခွန်တစ်မျိုးတည်း ပေးဆောင်ရတာလည်းရှိတယ်။ အဲသည်လုပ်ငန်းတွေက ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျူရှင်၊ သင်တန်း စတာတွေ၊ လက်ခစားသက်သက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်း၊ ဆန်စက်၊ ဆီစက်တွေ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမြတ်ခွန်က တစ်နှစ်လုံးအမြတ်ကျပ်သုံးသိန်းနဲ့အထက်ဆိုရင် ၅၀% ပေးဆောင်ရမှာပါ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အနည်းဆုံး ၅% ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, June 25, 2010 Links to this post
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဂီလတ်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ သမိုင်းတလျှောက် ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကို လက်ခံရယူပြီးနောက် အလွန်ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်မိကြောင်း ဂျူလီယာဂီးလတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ကီဗင်ရုဒ်က လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပြီးနောက် ယင်းအာဏာရပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်ရာထူးကို ဆက်ခံကာ နိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစလာသူ ဂျူလီယာသည် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအနေနှင့် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံရေးတွင် အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လေဘာပါတီ၏ ပြန်ကြားရေးဌာန တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် မိုက်ကယ်ဖောရှောက “လေဘာပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်သစ်နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်သစ်အဖြစ် ဂျူလီယာဂီးလတ်ကို ခန့်အပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အတည်ပြု သတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ကင်ဘာရာတွင် ပါတီတွင်း အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးနောက် ယခုလို တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်နေရာ အပြောင်းအလဲ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဖောရှောက ယခုဆုံးဖြတ်ချက်သည် လေဘာပါတီအတွက်ရော၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ကီဗင်အတွက်ပါ အလွန်ခက်ခဲစေကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။ သို့သော်လည်း ပါတီ၏ လက်ရှိယိမ်းယိုင်နေသော အနေအထားက ခေါင်းဆောင်သစ်တစ်ဦး လိုအပ်နေသည်ကို ညွှန်ပြလျက်ရှိကြောင်းလည်း ဖောရှောဆိုသည်။ “ကီဗင်ဟာ (၂၀၀၇)ခုနှစ်က လေဘာပါတီကို အာဏာရလာဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုကတော့ ဂျူလီယာကို ပါတီဒုတိယခေါင်းဆောင် ခန့်အပ်ခဲ့တာပါပဲ”ဟု ဖောရှောကဆိုသည်။ ထို့အပြင် ၀န်ကြီးချုပ်သစ် ဂျူလီယာသည် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေဘာပါတီအား ပြည်သူ့ထောက်ခံမှုရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်းလည်း ဖောရှောက မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုသွားသည်။ွှ့ဤသတင်းအား ပလဲနက်(Planet) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်.။
မြန်မာပြည်မှာ အက်ဖ်အီးစီ တန်ဖိုး ကျဆင်းနေဆဲ
အက်ဖ်အီးစီကို နိုင်ငံခြားငွေ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ) များကဲ့သို့ သုံးစွဲခွင့် ပြုထားသော်လည်း ပြင်ပငွေ လဲလှယ်ရေး ဈေးကွက်တွင် အက်ဖ်အီးစီ တန်ဖိုးမှာ အနည်းငယ်သာ တက်လာကြောင်း ငွေကြေး ဈေးကွက် ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။ ဇွန် ၁၀ ရက်က အက်ဖ်အီးစီ တစ်ယူနစ်လျှင် ၉၄၀ ကျပ်ရှိရာမှ ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် တစ်ယူနစ်လျှင် ၁၀ သာ တက်လာပြီး ၉၅၀ ကျပ် ဈေးပေါက်သည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာမှာ ဇွန် ၁၉ ရက်က တစ်ယူနစ်လျှင် ၉၈၃ ကျပ် ဈေးရှိ၍ အက်ဖ်အီးစီထက် ၃၀ ကျပ်ကျော် ဈေးမြင့်နေသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ မေလအထိ အမေရိကန် ဒေါ်လာမှာ အက်ဖ်အီးစီ တန်ဖိုးအောက် လျော့နည်းနေရာမှ မေလကုန် နောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ အက်ဖ်အီးစီ တန်ဖိုးထက် ဒေါ်လာတန်ဖိုးက ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က အက်ဖ်အီးစီကို ၂၀၁၀ ဧပြီလ ၂ ရက်မှ စတင်၍ နိုင်ငံခြားငွေများ ကဲ့သို့ သုံးစွဲခွင့် ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အက်ဖ်အီးစီမှာ အသုံးဝင်မှု ပိုလာသော်လည်း တန်ဖိုးသိသာစွာ တက်မလာခြင်းမှာ ယခင်ကဲ့သို့ အက်ဖ်အီးစီဖြင့် စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူမှုမှာ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် လျော့နည်းလာ၍ ဖြစ်ကြောင်း ဈေးကွက် ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။
ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များမှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက်မှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချလာသည့် အတွက်အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ရောင်းချသည့် ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူမှု လျော့နည်းသွား ခြင်းကြောင့်၊ အက်ဖ်အီးစီ အသုံးပြုမှု လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် အတူ တန်ဖိုးပါ ကျဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဈေးကွက် ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် 7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့လယ်ခေါင်မှာ လုယက်မှုဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်အသတ်ခံရ
ရန်ကုန်တိုင်း ခရမ်မြို့နယ့်မှာ အခု ၂၂ ရက်နေ့က လုယက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး လုယက်မှုခံရတဲ့အိမ်ရှင် အသတ်ခံ လိုက်ရပါတယ်။ ခရမ်းမြို့ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် မြေနီလမ်းမှာရှိတဲ့ အမှတ် ၂ အထက်တန်းပြ ဆရာမ ဒေါ်မွှေးမွှေးခင် နေအိမ်မှာ ပစ္စည်းလုယက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး အသတ်ခံလိုက်ရ တယ်လို့ ခရမ်းမြို့ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“၂၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ အထက်တန်းပြ ကျောင်း ဆရာမ ဒေါ်မွှေးမွှေးခင် အသက် ၅၃ နှစ်ဟာ အိမ်ထဲမှာပဲလေ ပစ္စည်းတွေကို လု ယက်ပြီးတော့ အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ သက်တဲ့လူက သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ စက်ဘီး တုပ်ကြိုးနဲ့ လည်ပင်းကို သုံးချက်လောက် ပတ်ပြီးတော့ ချိတ်နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ ထောင်ထားခဲ့တယ်။ “အခုထက်ထိ သတ်တဲ့လူ ဘယ်သူ ဆိုတာတော့ မပေါ်သေးဘူးပေါ့။ ရဲအဖွဲ့ တွေ တိုင်းရော၊ ခရိုင်ရော၊ ခရမ်းက ရဲရော အားလုံး ကြိုးစားနေကြတယ်လေ။ အဲဒီ ဟာကြီးက တော်တော်ဆိုးတယ်။
ဒီနေ့ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ပြီလေ။” ဒီလုယက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခရမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် ပြန် လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီခရမ်မြို့ခံက သူရဲစခန်းကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းစဉ် ရဲက ဘယ်သူဘယ်ဝါ လုယက်ခဲ့လဲဆိုတာက စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေဆဲ ဖြစ် ပြီး အခုသံသယရှိဖွယ် ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒေါ်မွှေးမွှေးခင်ဟာ တဦးတည်းဖြစ်ပြီး သူနှင့်အတူ ညီမဖြစ်သူက ဒေါ်ဥမ္မာ ခင်နဲ့ အတူ နေထိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဒီဟာကို အလုခံရတာလည်း သူ့ညီမကလည်း အထက ၁ မှာ သူက လည်း အထက်တန်းပြ၊ သူက ညနေ ၃ နာရီခွဲ အိမ်ကိုပြန်လာတော့ သူ့အစ်မ လည် ပင်းကို ကြိုးတုပ်ထားလျှက်ကြီးနဲ့ တန်းလန်းကြီး သေနေတာ၊ တန်းလန်းကြီး တွေ့ရ တယ်၊ အဲဒီကျမှ သူကလည်းသိတယ် တောင့်နေပြီ သေတော့။ “အဲဒါ ခရမ်းမြို့သူ မြို့သားတွေရော၊ နယ်သူနယ်သားတွေရော အကုန် တုန် လှုပ်ချောက်ချား ကုန်တာပေါ့နော်၊ ကြောက်စရာကြီး သူ့ဥစ္စာက၊ အခုတော့ ရဲစခန်း ကို မေးကြည့်တော့ ရဲစခန်းက အခု လောလောဆယ်တော့ မပေါ်သေးဘူးတဲ့၊ သူတို့ ပေါ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပါတယ်တဲ့၊ အခု သူတို့ ၄ ယောက်ဖမ်းပြီးတော့ ထည့် ထားတယ်၊ ရမန်ယူတယ်၊ နောက် အခြားသူတွေလည်း ခေါ်ပြီးတော့ ရဲကတော့ စစ်နေတယ်၊ ကြိုးစား ပမ်းစားတော့ ရှာနေတယ်ပေါ့၊ စစ်နေတယ်ပေါ့။”
ဒေါ်မွှေးးမွှေးခင်ဟာ ကျောင်းဆရာမဖြစ်ပြီး တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ ငွေတိုးချေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်နေကြာင်း ပြောပါတယ်။ သူအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အပြင် သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျပ်ငွေ ၁ဝ သိန်းပါ စုစုပေါင်း ကျပ်ငွေ ၅၉ သိန်းကျော် လုယက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ ခရမ်းမြို့ခံကပဲ ပြောပြသွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ ၁၆ ရက်နေ့ညကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှာ ရဆကသအားးပြတိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဓာပြတိုက်မှုအဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဓားပြတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့ ရွာသားတွေကို ဓားပြ တွေက ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ၂ ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သလို အိမ်ရှင်အပါအဝင် ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများအား တည်ဆဲ ဥပဒေများ လိုက်နာရန် သတိပေး
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အချက် ၆ ချက်ပါ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ကို ယခုလ ဒုတိယပတ် အတွင်းက နိုင်ငံရေးပါတီများထံ ပေးပို့လိုက်သည်။ “ ဒီအထဲက အချက်တွေက နည်းဥပဒေ၊ ဥပဒေထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။ ထူးခြားချက် တစ်ခုပဲ ပါပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပါတီဆိုင်းဘုတ် အလံတွေကို မိမိတို့ ပါတီရုံးတွေမှာသာ လွှင့်တင်စိုက်ထူဖို့ ဆိုတာပါ။ ဒါက ကော်မရှင်ကနေ ပါတီတွေကို ပေးပို့တဲ့ ပထမဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်ပဲ ”ဟု ဝံသာနု NLD (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)မှ ဒေါ်နန်းရွှေကြာက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီ များ အားလုံးသည် ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိပြီးပါက ပါတီဝင် အင်အား စည်းရုံးခြင်း၊ ပါတီ အသိအမှတ်ပြုလွှာ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပါတီဝင်ကြေး၊ ပါတီလစဉ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းနှင့် စည်းရုံးရရှိသည့် ပါတီဝင် အင်အားကို သတ်မှတ်ထားသော ရက် ၉၀ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရန်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပြဋ္ဌာန်းသည့် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့ကို လိုက်နာရန် ပါတီရုံးနှင့် ရုံးခွဲများ ဖွင့်မည်ဆိုပါက အစိုးရပိုင် အဆောက်အအုံ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းပိုင် အဆောက်အအုံနှင့် သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်း မပြုရန်၊ ပါတီဆိုင်းဘုတ် အလံတို့ကို နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဌာနချုပ်၊ တိုင်း/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ပါတီရုံးများတွင်သာ တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ အလံကို နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရုံးများ၌သာ လွှင့်ထူရန်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ (၁၅)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညိစွန်းကြောင်း ကော်မရှင်က တွေ့ရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်မည် စသည်တို့ ပါရှိသည်။ ထိုထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက “မှတ်ပုံတင်လျှောက်ဖို့ တစ်ခါ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုတော့တစ်ခါ ကော်မရှင်က စာပို့ဖူး ပါတယ်။
ကော်မရှင်က ဒါမျိုးထုတ်ပြန်တာတော့ ပထမဆုံးပါ။ အခုဟာက ပါတီတွေကို သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ” ဟု သုံးသပ်သည်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို မတ်လ ၁၁ ရက်က ၁၇ ဦး အဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်များကိုလည်း အဆင့်ဆင့် ဆက်လက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သို့ ယခုလ ၁၈ ရက်အထိ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်နှင့် ဆက်လက် တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် ပါတီ ၄၂ ခုရှိပြီး မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် ပါတီ ၃၅ ခုအနက် ၃၃ ပါတီကို ခွင့်ပြုပြီး ဖြစ်သည်ဟု ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားသီချင်းကိုမြန်မာပြည်တည်းမှာ မြန်မာမလေး “က ”နေတာ သူများယှဉ်ကျေးမှုကို လိုက်တုပြီး“ က ”နေတော့ မြင်ရ တွေ့ရတာ တယ်လဲမကောင်းပါလားနော်..
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, June 24, 2010 Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၆၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကို နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးတဦးမှအင်္ဂလိပ် ၊ထိုင်း၊ မြန်မာ ၃ဘာသာဖြင့် မွေးနေ့အတွက်သီဆိုဂုဏ်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများနေ့ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၆၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲကို ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီး တွင်ကျင်းပကြသကဲ့သို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်မိုင်မြို့ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ် အတွင်းရှိ ရှေးဟောင်းအနုပညာပြတိုက်ခမ်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည် ။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးတဦးမှ အင်္ဂလိပ် ၊ ထိုင်း ၊ မြန်မာ ၃ ဘာသာဖြင့် မွေးနေ့အတွက် သီဆိုဂုဏိပြုမှုကို ရိုက်ကူး တင်ဆက်ထားပါသည် ။
ခေတ္တ ချင်းမိုင်ရောက် (FVJ) Aung Lin
Lဆိုင်းဇီ၏ စင်တင်ပွဲအမျိုးသားကဇာတ်ရုံတွင်ကျင်းပတဲ့ ဘုရားစူးစေမြန်မာအမျိုးသမီးတွေပါဘဲလား?၊ သီချင်းဆိုမှာလား?၊ ဖော်ချွတ်နေမှာလား?၊
ရန်ကုန် အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံကြီးတွင် L ဆိုင်းဇီ၏ အကောင်းဆုံး တေးများကို စုစည်းပြီး “မိုးရာသီထဲ” အမည်ရှိ စင်တင် ဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ် တင်ဆက်ခဲ့ရာ နာမည်ကြီး အဆိုတော်များစွာ ပါဝင်သီဆို ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၁၉ ရက်နေ့ ညနေက ကျင်းပသည့် ယင်းဖြေဖျော်ပွဲတွင် Lဆိုင်းဇီနှင့်အတူ ဇော်ပိုင်၊ Lလွန်းဝါ၊ Rဇာနည်၊ အဲလက်စ်၊ နောနော်၊ အနဂ္ဂ၊ ဟဲလေး၊ ရဲလေး၊ မျိုးမျိုး၊ဇင်မင်းခန့်၊ သားကြီး၊ Jenny၊ သံသာဝင်း၊ ချစ်သုဝေ၊ ငယ်ငယ်၊ ဇမ်နူး၊ Nကိုင်ရာ စသည့် တေးသံရင်များ သီဆို ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီး K မီကို၏ အကအဖွဲ့လည်း ပူးပေါင်း တင်ဆက်ခဲ့သည်။
တေးဂီတကို The Threes အဖွဲ့က တီးခတ်ကြသည်။
ပွဲစဉ် တခုလုံးတွင် စီစဉ်တင်ဆက်သူ အဖြစ် တင်မိုးလွင်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ L ဆိုင်းဇီ က သူ၏ အကောင်းဆုံး တေးသီချင်း များကို ပရိသတ်အကြိုက် သီဆိုပေးကာ သူနှင့်အတူ ပါဝင်ဖျော်ဖြေသော တေးသံရှင်များကလည်း ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် တေးသီချင်းများနှင့် တင်ဆက်ခဲ့သည်။
L ဆိုင်းဇီ၏ စင်တင်ပွဲကို ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနယ်ပယ်မှ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်များနှင့် သူ၏ ပရိသတ်များ စည်ကားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ် AIT က MCC၊ ILBC တို့ နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်မည်
မြန်မာ့ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိက အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်အား အရှေ့ တောင်အာရှဒေသတွင် နာမည်ကြီး AIT နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ MCC, ILBC တို့ပူးပေါင်း၍ စက်တင်ဘာတွင် စတင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာ တက္ကသိုလ်အတွက် Foundation Course အား ILBC မှ တာဝန်ယူ သင်ကြားမည်ဖြစ်ကာ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တို့ကို MCC မှ တာဝန်ယူသင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး သုံး နှစ်စလုံးကို ပြင်ဦးလွင်ရှိ MCC Trai- ning Institute (ရတနာပုံ)တွင် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ထို့နောက် တတိယနှစ်နှင့် စတု တ္ထနှစ်တို့အား ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက် မြို့ရှိ AIT Main Campus တွင်တက် ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ရတနာပုံမှာ တက်ရမယ့်အ တွက်ကလေးတွေအတွက် AIT Main Campus မှာတက်ရတာနဲ့ မခြားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ဗန်ကောက်မှာတက်ရတဲ့ အခါ အခက်အခဲမရှိအောင်မြင်ပါလိမ့် မယ်''ဟု MCC မှ CEO ဒေါ်ချော ခင်ခင်က ပြောသည်။
ထို့နောက် အဆိုပါပုဂ္ဂလိက အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်တွင် သတင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဘာသာရပ် Telecommunications နှင့် Mechatronics ဘာသာရပ်တို့သင်ကြားမည် ဖြစ်ပြီး B.Sc ဘွဲ့ရရှိမည်ဖြစ်ကာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး ပျမ်းမျှတစ်ဘာသာအမှတ် ၆၀ရရှိသူ များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းသိရ သည်။
မြန်မာသင်္ဘောကပ္ပတိန်နှင့်အဖွဲ့ လှိုင်းကြားလေကြား သက်စွန့်ဆံဖျားဖြင့် လူလေးဦးအသက်ကယ်
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း မုန်တိုင်းမိကာ မျောနေသော ရွက်သင်္ဘောပေါ်မှ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား လေးဦးကို မြန်မာသင်္ဘောကပ္ပတိန်ခေါင်းဆောင်သော သင်္ဘောသားအဖွဲ့က အသက်ရှင်လျက် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူး သင်္ဘောသားများအသင်း(MOSA)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုဇွန် ၉ရက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်း၌ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားလေး ဦးပါဝင်သော အပျော်စီးရွက်သင်္ဘောသည် စပိန်အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၃၀၀အကွာ ၌ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် တက်မကျိုးပြီး သမု ဒ္ဒရာအတွင်း လှိုင်းများကြား၌ မျောနေစဉ် မြန်မာသင်္ဘောကပ္ပတိန် ဦးဇော်အောင် ခေါင်းဆောင်သည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတင် သင်္ဘော MTM Princess သည် သမုဒ္ဒရာ တွင်းမျောကာ ဒုက္ခတွေ့နေသော ယင်း အပျော်စီးသင်္ဘောအားတွေ့ရှိ၍ အခက် အခဲများကြားမှ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားလေးဦး ကို အသက်မသေဘဲ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
''အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားလေးဦးက အမျိုးသားနှစ်ဦး၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးပါ။ အသက်ကတော့ (၅၈)နှစ်နဲ့ (၇၀)ကျော်ဝန်း ကျင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မြန်မာသင်္ဘော ကပ္ပတိန်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားလေးဦးကို သက်စွန့်ဆံဖျားကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ကို ဗြိတိသျှနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Fair Play မဂ္ဂဇင်းမှာ တခမ်းတနားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီလို အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားလေး ဦးကို သက်စွန့်ဆံဖျားကယ်တင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောကပ္ပတိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကို အလွန်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။ အခမ်းအနား နဲ့ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒီလိုသမုဒ္ဒရာအကျယ်ကြီးမှာ သင်္ဘောတစ်စင်းက လှိုင်းလေကြားထဲမှာ ပျက်စီးနေတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းထဲကလူတွေ ကို အသက်မသေဘဲ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာ နည်းတဲ့အရည်အချင်းမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ သတ္တိနဲ့စိတ်ဓာတ်ကို သင်္ဘောသားတိုင်း အတုယူသင့်တယ်''ဟု MOSA မှ တာဝန် ရှိသူက ပြောသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်ကဲ့သို့ပင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၈ခုနှစ်ကလည်း သမုဒ္ဒရာအတွင်း လှိုင်း လေများကြား၌ ပြည်သူများ၏ အသက် ကို ကယ်တင်ခဲ့သော မြန်မာသင်္ဘောကပ္ပတိန် တစ်ဦးရှိခဲ့ဖူးကြောင်းသိရသည်။
၂၂.၆.၂၀၁၀ (အင်္ဂါ)နေ့တွင် ကဗျာဆရာ သစ္စာနီ၊ စာရေးဆရာ မောင်စိမ်းနီတို့ ဦးဆောင်သော ကဗျာဆရာများအဖွဲ့သည် ဓမ္မစေတီကျောင်းဝင်း အတွင်းတွင် ကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်သော တိုင်းကျိုး ပြည်ကျိုးပြု ကဗျာဆရာကြီးများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအား ရည်စူး၍ မှတ်မှတ်ရရ အရိပ်ရ သစ်ပင်ကြီးများ စိုက်ပျိုးခြင်း ပြုလုပ်ရန်နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်သို့၎င်း ၀င်ရောက်၍ “သုခအလင်း စာကြည့်တိုက်”အား လေ့လာကြည့်ရှုကြပြီး အဖိုးတန် စာအုပ်စာပေများအား လာရောက်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ခြံဝင်းအတွင်းတွင်လည်း သမိုင်းဝင် မှတ်တိုင်အဖြစ် အရိပ်ရ သစ်ပင်ကြီးများအား လာရောက်ပြီး စိုက်ပျိုးမည်ဟု ကဗျာဆရာများအဖွဲ့မှ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ရွှေဇီးကွက်)တို့ကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
စေတနာရှင် ကုသိုလ်ရှင် အများပြည်သူ (ပြည်တွင်း ပြည်ပ)မှ လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေများဖြင့် ရေဒုက္ခသည်များရှိရာ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ဒေသများသို့ ရေတိုစီမံကိန်းအဖြစ် ရေးဆွဲချမှတ်ကာ အရေးပေါ် လိုအပ်လျှက်ရှိသော သောက်သုံးရေများအား ပေးဝေ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ရေရှည်စီမံကိန်းအဖြစ်လည်း “အများပြည်သူအတွက် အများပြည်သူ ကောင်းမှု နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)”ဟု ကဗျည်းရေးထိုးကာ ရေတွင်း (အ၀ီစိတွင်း) တူးဖော်ခြင်း၊ အုတ်ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေစုပ်စက် မော်တာများ တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ လက်ဆင့်ကမ်း ကုသိုလ်ယူကာ နယ်ခံ၊ ဒေသခံ လူမှုရေးသမား များနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် အကောင်အထည်ဖော် လှူဒါန်းမှုများ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်မြို့နယ် အတွင်းတွင် ကျန်ရှိနေသော တူးဖော်ဆဲ အ၀ီစိတွင်းများ၊ အုတ်ရေကန်များ လုံးဝ ပြီးစီးသွားပါက အများပြည်သူအလှူငွေဖြင့် အများပြည်သူအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့သော ကုသိုလ်ရေးကို ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေ သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း . . . .
လူမှုရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဗြဟ္မစိုရ်နှလုံးသားကို လက်ကိုင်ပြု လုပ်ကိုင်ကြရသော်ငြား … အဓမ္မ၀ါဒီ၊ အတ္တသမားများကို အစဉ်တိုက်ထုတ်ပစ်ရမည် ဖြစ်ပါ၏။
လူသားတို့အတွက် လူမှုရေးသည် လူသားတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ရှေ့ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဟု ဆိုရာတွင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
ကမ္ဘာလောကကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေး တို့အပြင်
မိမိ ကိုယ်ကို ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိစေရမည်။
မိမိ ကိုယ်ကို ငြိမ်းချမ်းပါမှ အများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပေးဆပ်နိုင်မည်ဖြစ်၏။
ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိပါက လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
လွတ်ငြိမ်းမှု ရှိပါမှ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိမည်။
လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝပါမှ သာယာစိုပြေသော ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် နေထိုင်ရကျိုး နပ်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခုတုံးလုပ်၍ လူမှုရေးကို ထမ်းဆောင်သည်။
လူမှုရေးကို ခုတုံးလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖန်တီးဖော်ထုတ်မည် ဖြစ်၏။
သို့သော် … ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဖော်ထုတ်ကြ၊ မဖန်တီးကြ၊ မတူးဖော်ကြ . . . ။
ထို့ကြောင့် … လူသားတို့ မပျော်ရွှင်ကြ၊ မလွတ်လပ်ကြ၊ စာရိတ္တများ ပျက်ဆီးကြ၊ သီလများ မလုံခြုံကြ၊ အတ္တသမားများဖြစ်ကြ၊ အဓမ္မ၀ါဒီကို ကျင့်သုံးနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလောကကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာဖို့ … ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိက။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် … ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ပြည်သူ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိက။
ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ပြည်သူ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် … ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ့်ဌာန ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိက။
ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ့်ဌာန ငြိမ်းချမ်းရေးသည် … ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်မိသားစု ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိက။
ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်မိသားစု ငြိမ်းချမ်းရေးသည် … မိမိ ကိုယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဓိက။
ထို့ကြောင့် … မိမိ ကိုယ်ကို ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေကြသော … ဘာသာတရား၊ အဆုံးအမ၊ သြ၀ါဒ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လမ်းညွှန်မှုတို့ကို ကျင့်သုံးရတော့မည်။
မိမိ ကိုယ်ကို တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ မိမိ၏ အဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင် အားလုံး၏ သန့်ရှင်းမှု၊ စည်းကမ်းရှိမှု၊ လူ့ဝတ္တရား တာဝန်ကျေမှု၊ ဖေးမမှု၊ ပံ့ပိုးမှု၊ ပေးဆပ်မှု စသဖြင့် ဗြဟ္မစိုရ်တရား ပြည့်ဝမှု၊ လိုက်နာမှုတို့သည် အဓိကကြတော့သည်။
မိမိတို့၏ ၀န်ထမ်းများ၊ အမှုဆောင်များ၊ အသင်းသူ/သားများတို့သည် ဗြဟ္မစိုရ်တရား လက်ကိုင်ထားသည့်အလျောက် အသင်းအဖွဲ့ကြီး တစ်ခုအနေနှင့် ပြည်သူလူထုအား ပေးဆပ်နေကြရုံနှင့် မပြီး။ ညင်သာ ထွေးပွေ့ပေးရုံနှင့် မပြီး … မိမိတို့၏ ၀တ်စားဆင်ယင် သပ်ရပ်မှု သည်လည်း အဓိက ပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့် … လိုအပ်သော သင့်လျော်မည့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတို့ကိုလည်း မိမိတို့ အစဉ်အမြဲ ဖန်တီးပေးနေကြသည်။
ထို့ပြင် … မိမိတို့ထံ ဆေးဝါးလာရောက်ကုသကြသော ဝေဒနာရှင် လူနာများ၊ ငွေလှူဒါန်းရန် လာရောက်ကြသော အလှူရှင်များ၊ လာရောက်လေ့လာကြသော ဧည့်သည်တော်များ၊ ပညာရေး၊ အနုပညာရေး လာရောက်သင်ကြားကြသော မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များ၊ မိဘများတို့သည် မိမိတို့ အသင်းအဖွဲ့ တည်ရှိရာ နေရာသို့ ၀င်ရောက်လာပြီဆိုပါက … နွေးထွေးသော ကြိုဆိုမှု၊ အသင်းလုပ်ဆောင်မှုတို့ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းလင်းပြသမှု၊ လူနာတို့ကို နွေးထွေးစွာ ဆေးဝါးကုသပေးမှု၊ ကလေးငယ်တို့အား ပညာဒါန ဖြန့်ဝေပေးမှု စသည်တို့ကို မပြုလုပ်မီ . . . . အသင်းအဖွဲ့ရုံးသို့ ၀င်ဝင်လာခြင်း စိတ်ကြည်နူးမှု၊ အေးချမ်းမှု၊ သာယာစိုပြေသော ငြိမ်းချမ်းသော စိတ်အင်အားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် … မိမိတို့၏ အဆောက်အအုံ ခြံဝင်းသည် စိမ်းလန်းစိုပြေသော ကမ္ဘာလေး တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားစေရန် … စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သော အရိပ်ရအပင်၊ အလှပန်းပင်၊ သီးပင်စားပင်များ စိုက်ပျိုးမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေရပါသည်။ မိမိတို့ ရရှိထားသော နိုင်ငံတော်မှ ပေးထားသော မြေနေရာသည် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် (ပလပ်စတစ်) အမှိုက်ပုံဖြစ်နေ၍ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ပြုလုပ်ခြင်းတို့သည် များစွာအခက်အခဲ ရှိသော်ငြားလည်း လူအင်အား၊ ငွေအင်အား၊ အချိန်ပေး၍ အမှိုက်ထဲမှ ရွှေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရသည်မှာ မိမိတို့၏ တာဝန်ဖြစ်တော့သည်။
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့ဘုံဘ၀တစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရည်စူးကာ ၁၉.၆.၂၀၁၀ (စနေ) နေ့မြတ်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းမှ ဓါတ်မှန်ခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဂျိုးငှက်များ၊ ခိုများ၊ စာကလေးများကို ဘေးမဲ့လွှတ်ခြင်း၊ မိုးပျံပူဖောင်းများကို လွှတ်တင်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် “အတ္တ၀ါဒီ ကျဆုံးပါစေ . . . အဓမ္မ၀ါဒီ ကျဆုံးပါစေ” ဟု မိမိမှ တိုင်တည်၍ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် … ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တို့ ခိုင်မာဖို့အရေးကြီးသည်။
အခြေခံအုတ်မြစ် ခိုင်မာစေရန် … မိမိတို့ အစဉ်သဖြင့် ကြိုးစားလျှက် ရှိပါကြောင်း . . . . . ။
အယောင်ဆောင် ဘိုးတော်နှင့် အဖွဲ့က မိန်းကလေး ခြောက်ဦးကို သွေးဆောင် ဖြားယောင်း ဖျက်ဆီးခဲ့မှု ဖြစ်ပွား
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့အနီးရွာတစ်ရွာတွင် ဘိုးတော် အယောင်ဆောင်သူ တစ်ဦးက ဇနီး၊ တပည့် ဖြစ်သူတို့နှင့် အတူ မိန်းကလေးများကို ဖြားယောင်းေ သွးဆောင်ကာ လိမ်လည်ခြိမ်းခြောက် ရေမန်းတိုက်ပြီး သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့သည့် အမှုအား မေ ၂၇ ရက်က သထုံခရိုင် တရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ကျိုက်ထိုမြို့အနီး မဲရုံးကြီး ကျေးရွားနေ ဦးကြယ်ဝင်းက ကျိုက်ထို ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၌ မေ ၂ ရက်တွင် အမှု တိုင်ကြားချက်မှာ ၎င်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မငို တို့ ဧပြီ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်က ၎င်းတို့ရွာနှင့် နှစ်မိုင်ကျော် ဝေးသည့် တင်းဝါးတောင်တွင် သာသနာပြု လုပ်ငန်းကို ဗန်းပြနေထိုင်သူ ချစ်လှိုင် (၅၂)နှစ်နှင့် အဖွဲ့က အနီးအနား ကျေးရွာရှိ အပျိုရွယ် မိန်းကလေးများကို စည်းရုံးခြောက်လှန့် သိမ်းသွင်းပြီး ရေမန်းများ တိုက်ကာ သားမယားပြုကျင့် ဖျက်ဆီးနေကြောင်း ၊ ၎င်းတို့၏ သမီး(မ….) (၄၂) နှစ်မှာ ဘိုးတော် ချစ်လှိုင်နှင့် ကိုယ်ဝန် ခြောက်လ ရရှိထားကြောင်း၊ ရွာမှ လူများက ပြောပြသိရှိရ၍ လွန်ခဲ့သော ရှစ်လခန့်က တင်းဝါးတောင်တွင် သွားရောက် နေထိုင်သူ သမီးအကြီးအား စိတ်ပူ၍သွားရောက် ခေါ်ယူရာ သမီးဖြစ်သူက ပြန်မလိုက် နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဦးကြယ်ဝင်းတို့က ဆွဲခေါ်ရာ ဘိုးတော်ချစ်လှိုင်က မောင်းထုတ်သည့် အပြင် ဖမ်းဆီး၍ ကြိုးနှင့် တုပ်နှောင်ရန် ချစ်လှိုင်၏ဇနီး ဒေါ်မြကြည်နှင့်တပည့် ပန်းစိန်တို့အား စေခိုင်းသဖြင့် ရွာသို့ ပြန်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာရယကအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ဧပြီ ၃၀ရက်တွင် တင်းဝါးတောင်သို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရယကအဖွဲ့ဝင်များက ဘိုးတော်ချစ်လှိုင်နှင့် အဖွဲ့အား သွားရောက် ခေါ်ဆောင်ပြီး အတူနေ မိန်းကလေးများကို စစ်ဆေးရာ ဦးကြယ်ဝင်း၏ သမီးငယ်(မ…) (၂၅) နှစ်မှာလည်း ကိုယ်ဝန် ရှိနေကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ ကျိုက်ထို ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းက ဘိုးတော်ချစ်လှိုင် (၅၂)နှစ်၊ ဒေါ်မြကြည် (၄၈)နှစ်၊ ပန်းစိန် အသက်(၅၀) တို့အား(ပ) ၂၃၄/၁၀ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၄၁၉/၅၀၆/၂၉၅-က/၃၄ တို့အရ မေ ၂ ရက်တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့သည်။
ကျိုက်ထို ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ စခန်းမှူးရဲအုပ် ဝင်းအောင်က အမှုအား စစ်ကြော ဖော်ထုတ်ရာ ဘိုးတော်ချစ်လှိုင်၊ ၎င်း၏ဇနီး ဒေါ်မြကြည်၊ တပည့်ဖြစ်သူ ပန်းစိန်တို့သုံးဦးသည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ခန့်က မဲရုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု ကတိုင်တွတ်ကျေးရွာအနီး တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ဘုရားတည်၊ တရားအားထုတ်ရန် အကြောင်းပြ၍ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ အနီးအနား ရွာများမှ ဘုရားတွင် တရားအားထုတ်ရန် လာသူ အမျိုးသမီးငယ်များကို စည်းရုံး သိမ်းသွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မိန်းကလေးများ အနက် မဲရုံးကြီးရွာနေ မိန်းကလေး ခြောက်ဦးမှာ ဘိုးတော်ချစ်လှိုင်တို့ အဖွဲ့၏ လိမ်လည် ဖြားယောင်း သွေးဆောင်မှု၊ နတ်စားခံရမည်၊ သွေးအန်မည်ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကြောက်လန့်ကာ ဘိုးတော်ချစ်လှိုင်၏ သားမယား ပြုကျင့်ခြင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အမှုအား သထုံခရိုင် တရားရုံးက ဥပဒေ အကြံပေးချက်အရ နစ်နာသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်လှိုင် (၅၂) နှစ်(ဘ) ဦးရွှေချစ် မဲရုံးကြီးကျေးရွာအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၅၀၆/၂၉၅က၊ ဒေါ်မြကြည် (၄၈)နှစ်(ဘ) ဦးအောင်ထွန်းနှင့် ပန်းစိန်အသက်(၅၀)(ဘ)ဦးမောင်ထွန်း မဲရုံးကြီး ကျေးရွာနေသူတို့အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆/၁၁၄/၅၀၆/၁၁၄ တို့အရ လည်းကောင်း၊ ယင်းအမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်လှိုင်အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၅၀၆၊ ဒေါ်မြကြည်နှင့်ပန်းစိန်တို့အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၁၁၄/၅၀၆/၁၁၄ တို့အရ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် စွဲချက်တစ်ခုစီဖြင့် သထုံခရိုင် တရားရုံး၌ မေ ၂၇ ရက်တွင် တရား စွဲဆိုထားကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, June 23, 2010 Links to this post
(မယက =လာဘ်ရမှ အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့)
(မြို.နယ်စည်ပင်= ချစ်တီး အကြွေးတောင်းသလို ငွေတောင်းသောအဖွဲ့)
(မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့=ရဲရဲတင်းတင်း ငွေတောင်းနေကျအဖွဲ့ )
တာဝန်ရှိသူတို့ သည် အောက်ပါတို့ ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အသိပေးတင်ပြပါသည်။
(၁) မြို့တော်သန့်ရှင်း သာယာ လှပရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
(၂) ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ကြိုတင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
(၃) အများပြည်သူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန်။
အမှတ်စဉ် (၁) မြို့တော်သန့်ရှင်း သာယာ လှပရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသိပေးခြင်း။
မြ၀တီမြို့ -ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ၊ညဈေးရှေ့သည် ၊အလွန်စည်ကားသော၊နေရာ တနေရာဖြစ်ပါသည်။စည်ကား တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၊ စနစ်တကျ ရှိသင့် ပေသည်။
ညဈေးရှေ့၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ(ကတ္တရာလမ်းမကြီး) ပေါ်ရှိ၊ ပျံကျ ဈေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၏ နေရာယူထားမှူ ။
စသည်တို့မှာ မြို့တော် သန့်ရှင်းသာယာ၊ လှပရေးအတွက် အလွန် အကျည်းတန် ရုပ်ဆိုးလှပါသည်။
ထိုသို့ ဆိုင်ခန်းများ၊ ကားများ၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီများကြောင့်ညနေပိုင်းအချိန်များတွင်၊ ၃ လမ်းသွား ကတ္တရာလမ်းသည်ပင်၊ ၁ လမ်းသာ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။တခါတရံ လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းတို. အမြဲ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။
အမှတ်စဉ် (၂) ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ကြိုတင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသိပေးခြင်း။
အထက်ပါတင်ပြသည့်အတိုင်း၊လမ်းများပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်၊ အမြဲလိုလိုပင်၊ယာဉ်အန္တရယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်၊ လူသေဆုံးမှူ များပင် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
ယာဉ်ထိန်းရဲများသည်လည်း၊ ယာဉ်အန္တရယ် ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှ၊ ရောက်ရှိလာတတ်သဖြင့်၊ ကြိုတင်စီမံချက်များဖြင့်၊ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကို စံနစ်တကျ၊ အမြဲ ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် သင့်တော်ပါမည်။
အမှတ်စဉ်(၃) အများပြည်သူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန် အသိပေးခြင်း။
ဈေးဆိုင်များ၏နေရာယူမှူကြောင့်၊ကတ္တရာလမ်းမထက်သာမက၊ လူသွားလမ်း(ပလက်ဖောင်း)တွင်လည်း အများပြည်သူ လမ်းလျှောက် မရခြင်း။ကျောင်းဆင်းချိ်န် ညနေပိုင်းတွင်လည်း ကျောင်းသားများ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်းတို.သည်၊ ဈေးဆိုင်များမှ အမိုးများမိုးထားခြင်း၊ စားပွဲခုံများ/ကုလားထိုင်များကို၊ ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် ချထားခြင်းတို.ကြောင့်၊ အများပြည်သူတို.အား၊ လွန်စွာမှ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါသည်။
စားသောက်ဆိုင်များ၏ ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်သည့်၊ ညှော်နံ့ပေါင်းစုံတို့ကြောင့်၊ အနီးတ၀ိုက်ရှိ ပြည်သူများမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ရပါသည်။
ထို.အတူ ညဈေး တ၀ိုက်တွင် ခေတ်မှီဆေးခန်း အပါအ၀င် ဆေးခန်းများစွာလည်းရှိသဖြင့်၊ လာရောက်ပြသသော လူနာများအဖို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါသည်။
ပေးစာ ရေးသူ၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း
ကျွှန်တော်သည်၊ မြ၀တီ မြို့ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။တနေ့တွင် အမျိုးသမီး နေမကောင်းသဖြင့်၊ ညဈေးရှေ့ရှိ ခေတ်မှီဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသပါသည်။
ပထမ အခက်အခဲ မှာ ကားရပ်၍ မရခြင်းဖြစ်ပါသည်။(အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဈေးဆိုင်များရှေ့ဆိုင်ကယ်၊ ကားတို့ ကို မဆင်မခြင် ရပ်နားထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။)
ဒုတိယအခက်အခဲမှာ -ပလက်ဖောင်းတွင် လမ်းလျှောက်၍ မရခြင်းဖြစ်ပါသည်။(ဈေးဆိုင်များရှေ့စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်များ ပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့်ပင်။)
တတိယအခက်အခဲမှာ - ဆေးခန်းသို့ရောက်သောအခါ ထိုင်နေစဉ်တွင် ညှော်နံ့ ပေါင်းစုံတို့ကို၊ ရှူ ရှိူက်နေရခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့် အယှက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါသည်။
ဆေးခန်းမှ ပြောပြချက်အရ၊ ညှော်နံ့ပေါင်းစုံသည်၊ နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်နေသောကြောင့်၊ မည်သို့လုပ်ရမှန်း မသိကြောင်း၊ လူနာများလည်း အလာ ကျဲသွားကြောင်း၊ အနားတ၀ိုက်ရှိ အိမ်များလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ညှော်နံ့ ပေါင်းစုံထွက်ပေါ်လာသော ဆိုင်ခန်းများမှာ……..
၁- ထမင်း ဟင်း ကြော်လှော်ရောင်းသည်.ဆိုင်။
စီမံဆောင်ရွက်သင့်သည်မှာ ခရိုင်/မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို.၏ ကွပ်ကဲမှူဖြင်. မြို့နယ်စည်ပင်၊မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲံ့၊ ကျန်းမာရေးဌာန တို. ပူးပေါင်းဆောင်နိုင်ရန် တင်ပြပါသည်။
မေလ်းထဲသို့ ပေးပို့ လာသော ကြောင့်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်.။
ယနေ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် လက်ထောက်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနှင့်ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ဆုံ
မစ်စ် ရော်ဘင် လာနာ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန် ကယ်ရီ (John Kerry) ရဲ့ လက်ထောက် ရော်ဘင် လာနာ (Robin Larner) က သူ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို လေ့လာဖို့ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဂျွန် ကယ်ရီရဲ့ လက်ထောက်တဦးဖြစ်သူ ရော်ဘင် လာနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက်နေ့ကတည်းက ရောက်နေခဲ့တာပါ။ သူ့ခရီးစဉ်အတွင်း နေရာ တော်တော်များများကို သွားရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲက အခြေအနေတွေကို လေ့လာ စုံစမ်းခဲ့တာလို့ ဒီကနေ့ သူနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
“အဓိကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေရယ်၊ NLD ရဲ့ အခြေအနေတွေရယ်၊ ဒါတွေကိုပဲ အပြန်အလှန် ပြောဖြစ်ပါတယ်။ အခု သူပြောပြချက်အရ သူက ၁၉ ရက်နေ့က ရောက်နေတယ်။ သာမန်လူတွေနဲ့လည်း သူ တွေ့တယ်။ နေရာတော်တော်များများ သူရောက်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ အဲဒါတွေ ပြောပြတော့ သူက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်တွေ့ အခြေအနေကို သိချင်လို့ လာတဲ့သဘောလို့ပဲ ကျနော် အဲဒီလောက်ပဲ မြင်ပါတယ်။”
NLD ဘက်ကတော့ လက်ရှိ ရည်တည်မှု အခြေအနေတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် ပါတီက ဘာကြောင့် မှတ်ပုံမတင်ရသလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြန်လည် ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ NLD ရဲ့ အခု ရပ်တည်နေမှု အခြေအနေကို မေးပါတယ်။ ဦးတင်ဦး ရှင်းပြတယ်။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့ရင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားတဲ့ အခြေအနေကို မေးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားတဲ့ အခြေအနေကိုတော့ ကျနော်တို့ အခုအချိန် မပြောနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးရဲ့ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာတွေက ကျနော်တို့လည်း မသိပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အခြေအနေတွေရယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက အပိုဒ် ၆ အခြေအနေတွေရယ်၊ နောက် နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေအရ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ကို ကိုယ် ထုတ်ပစ်ရမယ်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အကျဉ်းကျထားတဲ့ လူတွေကို ထုတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ကျနော်တို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို သူ့ကို ပြောပြတယ်။ သူ သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။”
NLD ဘက်က ရှင်းလင်း တင်ပြတာတွေကို ရော်ဘင် လာနာ အနေနဲ့ မှတ်သားသွားပေမဲ့ သူမဘက်ကတော့ သဘောထား ထင်မြင်ချက် ပြန်လည်ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိဘူးလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ရော်ဘင် လာနာဟာ သူမရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း ရှိမရှိဆိုတာ မသိရသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုတော့ မသိရပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တုန်းကလည်း ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိတွေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ ကနေဒါသံရုံး အရာရှိတွေ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က အမေရိကန် သံမှူးကြီးအိမ်မှာ ဒီကနေ့ ရော်ဘင် လာနာနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်း အပါအ၀င် ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးဟန်သာမြင့်၊ ဒေါက်တာ မေ၀င်းမြင့်နဲ့ ဦးဝင်းမြင့်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရော်ဘင် လာနာဟာ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ တွေ့ဆုံအပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆက်လက် တွေ့ဆုံတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွအထွေအတွင်းရေးမှူး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားBenazir Bhutto Shaheed ဆုပေးအပ်ခံရခြင်း
ပါကစ္စတန် ပြည်သူ့ပါတီမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား Benazir Bhutto Shaheed ဆုပေးအပ်လိုက်သည်။ အဆိုပါဆုကို လုပ်ကြံခံလိုက်ရသည့် ယခင် ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Benazir Bhutto Shaheed အားဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ၄င်း၏မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည်ကာလတွင် ယခုလိုပေးအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်သည့် ပါကစ္စတန် ပြည်သူ့ပါတီမှ လက်ရှိသမ္မတလည်းဖြစ် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Benazir Bhutt၀ ၏ ခင်ပွန်းလည်းဖြစ်သည့် Asif Ali Zardari, နှင့် အဆိုပါပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့် Bilawal Bhutto Zardari ဦးဆောင်သည်။ Benazir Bhutto Shaheed ဆုကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပထမဆုံးချီးမြှင့်သည့်ဆုလည်းဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင် နအဖ စစ်တပ်အတွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, June 22, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး ရဲ့  စစ်အာဏာရှင်များအား တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်..
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးပါတီဟောင်းတွေ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ရက်နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က မှတ်ပုံတင် တည်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ ဟာ ပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖြုတ်ချတာကို ကိုယ့်ဘာသာမလုပ်ခဲ့သလို၊ အာဏာပိုင်တွေက လည်း ဆိုင်းဘုတ်တွေ လာဖြုတ်ချတာ မရှိသေးပါဘူး။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ တရားဝင်ပါတီ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ စစ်အစိုးရက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်လာတာလည်း မတွေ့ရသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့  နျူကလီးယား အကြံအစည် လူသိရှင်ကြား ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ စစ်ရေးအရ ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေ ကြုံရနိုင်တဲ့အလားအလာ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကို ဘာမှမလုပ်သေးဘဲ ထားတယ်လို့ ယူဆစရာအကြောင်းက ရှိနေပါတယ်။ ဖမ်းတာဆီးတာတွေကို လုပ်တဲ့အခါမှာ စစ်အစိုးရအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများရဲ့  ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့်ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့  ဒုဥက္ကဌ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးတင်ဦးက သူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်နေစဉ်မှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)ရဲ့  လူတွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ စိမ့်ဝင်လာနေပြီဆိုပြီး တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေး မှုးက လူဖမ်းပွဲကြီး စီစဉ်တဲ့အခါ အဲဒီအချိန်က ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိန်ဝင်းရုံးခန်းမှာ သူနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ပုံကို အောက်ပါအတိုင်းပြောဆိုပါတယ်။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေက ထွက်တယ်။ အဲဒီမှာ ရုံးမတင်ဘဲ ဖမ်းတာဆီးတာ လုပ်စရာတွေရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်က ဗဟိုအဖွဲ့ထဲပါတယ်ဆိုတော့ ဗဟိုအဖွဲ့မှာ ဥက္ကဌက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ကျနော်က အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အဖွဲ့ဝင်၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက လည်း အဖွဲ့ဝင်၊ ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးတွေက အခါအားလျော်စွာ ခေါ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ လိမ်သတင်းကြားပြီးတော့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ လူတွေကို ဖမ်းတာဆီးတာ လုပ်တယ်ဗျ။ ထောက်လှမ်းရေးဘက်က သတင်းရပြီးတော့ ဖမ်းတာဆီးတာလုပ်ပြီးတော့ အဲဒီလူတွေနဲ့ ပတ်သက်တာကို ရုံးမတင်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့  ဗဟိုအဖွဲ့ကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ တင်တယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ လူတွေက သိပ်များတယ်။ ကရင်အမျိုးသားတွေ တော်တော်များတယ်။ များတော့ ကျနော်က ပြောမိတယ်။ တချို့ ဟာတွေက အသေးအမွှားလေးတွေ နေမှာပါ။ တချို့ ဟာတွေလည်း မှန်ချင်မှမှန်တော့မယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းကြားလို့ဖမ်းတာ သိပ်များလွန်ကြီးတော့ ဒီအရေအတွက်ကတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်လို့ ကျနော့်ရဲ့  အမြင်ကို ပြောမိတယ်။ အဲဒါကို ဒေါသထပြီးတော့ ဒီအလုပ်က ကျုပ်အလုပ်၊ ကျုပ်ဘာသာကျုပ်လုပ်မယ်။ ခင်ဗျားအလုပ်ကို ခင်ဗျားလုပ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးတွေပြောတယ်။ ဒါကို ကျနော်က သည်းခံလိုက်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ကကလှမ်းဒါရိုက်တာ(ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှုး)က ပြောတာလား။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ နံမည်တွေလည်း မပြောတော့ပါဘူး။ သူလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တာကို ဗိုလ်ချုပ်စိန်ဝင်း အခန်းမှာ ပြောမိတယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေ သိပ်များတယ်။ များတာကြောင့်လည်း သူကလည်း အဲဒီတုန်းက NIB (အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာတင်တုန်းမှာ သူလည်းကြုံနေတာမို့ သူ့စာရင်းကို ကျနော်က ဝေဖန်လိုက်တာပေါ့။ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကို ပြောရင်းနဲ့ သူကိုလည်းပြောလိုက်တယ်။ “ခင်ဗျား များလွန်အားကြီးတယ်။ တချို့ ဟာတွေက သတင်းအရအနေ နဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေများတယ်။ အရေအတွက်တွေ သိပ်များတော့ ယုတ္တိမရှိဘူး”။ သိပ်တော့မကောင်းလှဘူး။ အမြင်လည်းမကောင်း အကြားလည်းမကောင်း ဒီလောက်များနေ တော့။ ဖြစ်ဖို့မသင့်ဘူး။ စီစစ်ဖို့ ကျနော်က ပြောမိတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေါတွေကန်ပြီး ကျနော့်ကို ဒေါနဲ့မောနဲ့ ပြောတယ်။ ကျနော်ကတော့ သည်းခံလိုက်တယ်။ ဒေါနဲ့မောနဲ့ သူပြန်သွား တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတယ် “ကိုတင်ဦး စကားပြောရင် ကြည့်ပြော။ ခင်ဗျားကလည်း စိတ်ထဲရှိတာ ပြောတတ်တယ်။” အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိထားဖို့ သူကပြောတယ်။ ကျနော် လည်း သူကိုပြောလိုက်ပါတယ် “ဝန်ကြီးချုပ် ခင်ဗျားလည်း သတိထား။” အပြင်မှာလည်း ဖြစ်နေတာက ဆန္ဒပြပြီး အော်နေတာကလည်း ကြွေးကြော်သံတွေက ပြောင်းလာတယ်။ ပထမ ကြွေးကြော်သံတွေမှာက နေဝင်း၊ စန်းယု ကျဆုံးပါစေ။ နောက်တော့ စိန်ဝင်း၊ တင်ဦး အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ။ အဲဒီလိုအော်တော့ ကျနော်လည်း စိုရိမ်တာပေါ့။ ကျနော်က လည်း သူ့ကို သတိပေးတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်။ ကျနော်ရဲ့  သမိုင်းရေးတဲ့အထဲမှာလည်း အဲဒီအကြောင်းတွေ ရေးထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆို တော့ သူက ဒီလိုဖြစ်လာတာကိုး။ one and half ဖြစ်လာတော့ တန်းခိုးနည်းနည်းထွာလားတော့ သည်းခံလိုက်ရတာပေါ့။ အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပါ ဘဲ။ အဲဒါကတော့ ရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့။ ဒါက absolute power corrupt absolutely ဆိုသလိုပဲ တန်းခိုးအရှိန်အဝါ ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ ဒီလိုဟာမျိုးက လူ့သဘောအရ ဖြစ်တတ်တာ လေး တွေပေါ့။ အဲဒါလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတော့ ရှိခဲ့တာပေါ့။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေကို ဖမ်းတဲ့ဆီးတဲ့နေရာမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများရဲ့  ဘေး အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့်ဥပဒေကို မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးနေဝင်းက အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံတော်ရှေ့ နေချုပ်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သူသမ္မတဟောင်းဒေါက်တာမောင် မောင်ကို ဦးစီးရေးဆွဲခိုင်းတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဥပဒေဖြစ်မြောက်ရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ သူလည်း တဦးအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဦးတင်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
ဦးတင်ဦး ။ ။ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် အမြဲတမ်း စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ဟိုတုန်းက ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေအားလုံးမှာ ကျနော်တို့တတွေက လုပ်ခဲ့ကြတာတွေရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့ အခု ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေထဲမှာ ထုတ်ခဲ့တုန်းကလည်း ကျနော်တို့ပဲ။ ဥပမာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ဆိုတာကလည်း တကယ်ပြောရင် ကျနော်တို့ ပါခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒေါက်တာမောင်မောင်က တော်တော်လေး ပူပန်မှုရှိခဲ့တော့ သူပြောတဲ့စကားရှိတယ် “ကိုတင်ဦး ခင်ဗျား ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်ရွက်ရရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့၊ လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးကို မထိခိုက် မနှောက်ယှက် မပျက်ဆီးစေဘဲ ကြိုးစားပြီး လုပ်ပါဗျာ။” အဲဒီတော့ ဒီဥပဒေကြီး ထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်တော့ သူအနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ အင်မတန်မှ မသက်မသာ ဖြစ်တာကိုတော့ ဖွင့်ဟပြောခဲ့ဘူးတာတွေရှိတယ်။ ဦးနေ၀င်းက ဆရာသမား ကြီးအနေနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်တုန်းက ကျုပ်တို့တတွေက အစဉ်အလာနဲ့ ပါခဲ့ပြီး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီဟာကြီးက အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး နောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြ ရင် အရမ်းကာရော ဗရမ်းဗတာ လုပ်လိုက်ရင်တော့ ပြည်သူလူထုတွေ သိမ်းကျုံးခံရတော့မှာပဲဆိုတာ ရှိလာနိုင်တယ်။ ခင်ဗျားလုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်တာအားလုံးကိုလည်း အဲဒီလုပ်တာ ကိုတော့၊ ဒါကို နောင်လူနောင်သား ခင်ဗျားလည်း တပ်မတော်ထဲကနေ အရပ်သားဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီအခါကျရင် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခင်များကို ခြိမ်းခြောက်နေတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ တတ်နိုင် သမျှ လုံခြုံအောင် လုပ်ခဲ့စမ်းပါဗျာလို့ ပြောဘူးတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဦးနေဝင်း အမိန့်နဲ့ ဖန်တီးတီထွင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ၏ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ အရ ဦးနေဝင်းကိုယ်တိုင် အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကို ကြုံမသွားရပေမဲ့လည်း ဦးနေဝင်းရဲ့  နောင်လာနောင်သားတွေဟာ ဦးနေဝင်း ထွင်ခိုင်းလို့ထွင်လိုက်ရတဲ့ ဒီဥပဒေနဲ့ မလွတ်ဘဲ ရှိခဲ့သလို၊ ဒီဥပေဒ တီထွင် ပြဌာန်းစဉ်က ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးတင်ဦး ကိုယ်တိုင်လည်း ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း အာဏာပိုင်တွေက သူကို အရေးယူတဲ့အခါမှာ ဒီ ဥပဒေနဲ့ အရေးယူတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးတင်ဦး က တိုင်းသူပြည်သား မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မလိုရင်မလိုသလို စိတ်ကြိုက်ကျဖမ်းဆီး ထောင်ချနေတဲ့ လက်ရှိ အာဏာပိုင်တွေကို သင်ခန်းစာ ယူစေချင်ပါတယ်။
ဦးတင်ဦး ။ ။ အားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို အားလုံးသည် ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်၊ ချိန်ချိန်ဆဆ လုပ်ပါ။ ဒါကြီးက အသက်ဝင်ပြီး ရှင်သန်နေရင် ကိုယ်မရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်သားသမီး၊ မြေးမြစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါကြီးက ခြိမ်းခြောက်နေမယ့်ဟာကြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အရိပ်ဆိ်ုတာ ညောင်ညိုပင်ကြီးနဲ့ တူပါတယ်။ အရိပ်က အေးမြပါတယ်။ ညောင်ညိုပင်အရိပ်အောက်မှာ အေးချမ်းသာယာတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို သက်ရောက်ပြီးတော့။ ဒီ ညောင်ညိုပင်ရိပ်ကို ငါ့အရိပ်လို့ ထင်ပြီးတော့ လွဲမှားစွာ ထင် မှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ရင်တော့ အဲဒါဟာ အကျိုးကျေးဇူးများမှာထက် အကျိုးကျေးဇူး ယုတ်စရာသဘော ရှိတာပေါ့။ အဲဒီတော့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့  ဆန္ဒ၊ တရားမျှတတဲ့ ဆန္ဒအရ ပြည်သူ့အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ဝန်ထမ်းကောင်း ပီပီသသ ပြည်သူတို့သည် အမိ၊ ပြည်သူတို့သည် အဖ။ ပြည်သူအများစု စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာ ဖြစ်နိုင်အောင် လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်အောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားရင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပင် ပြည်သူပြည်သားအဖြစ် ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိတို့လည်း အေးချမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ ဒီလိုပဲ မှတ်ယူရမှာပါ။ ကျနော့် ဘဝက ဘယ်လိုဖြစ်နေသလည်းဆိုရင် တပ်သားဘဝကနေ ဒီအထိ ရောက်လာတဲ့အခါဆိုတော့ သမိုင်းတခုတော့ ရှိခဲ့တာပေါ့။ ဒီ သမိုင်းထဲမှာ ပြီးဆုံးတဲ့အထိ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ပြီးဆုံးချင်တယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သွားရင် ပြီးဆုံးချင်တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့  စစ်မှန်တဲ့ တကယ်ဆန္ဒ ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တာပဲ။ ကျနော်တို့လည်း လိုချင်တယ်။ ကျနော်တို့ သားသမီးတွေလည်း အဲဒီလို ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက် ဒီလို လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းသည် အခုလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဒီလို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှ သူတို့လည်း နောက် အေးချမ်းတဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ နေကြရမှာပါ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့  အရိပ်ထင်မှတ်မှားပြီး လိုက်လုပ်သွားခဲ့သည်ရှိသော ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးမှာတော့ ကြိမ်မီးအုံးသလို ခံရပြီးတော့ အင်မတန်မှ ကိုယ်ဆင်းရဲ၊ စိတ်ဆင်းရဲ အစစအရာရာ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ ပြည့်နေပြီးတော့ ဒုက္ခသုက္ခတွေ အတောမသတ်၊ မကောင်းမှု သံသရာကြီးထဲမှာ လည်နေတာကြီးကိုတော့ လွတ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ မြန်မာ နအဖသံရုံးမှ စက်ဖြင့်ဖတ်နိုင...
ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းအား အာဏာပိုင်များမှ ခေါ်ယူသတိေ...
မြန်မာ့လူပုလေး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ပြိုင်လို သူ၏လှုပ...
မြန်မာပြည်တွင်း၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကြိုတင်အခွန်...
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် ဂျ...
စည်းရုံးရေး တင်းကျပ်မှုကြောင့် လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်...
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများအား ...
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားသီချင်းကိုမြန်မာပြည်တည်းမှာ မြန်မာမေ...
မြန်မာ့ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ် AIT က MCC...
မြန်မာသင်္ဘောကပ္ပတိန်နှင့်အဖွဲ့ လှိုင်းကြားလေကြား သက်စ...
အယောင်ဆောင် ဘိုးတော်နှင့် အဖွဲ့က မိန်းကလေး ခြောက်ဥ...
ယနေ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် လက်ထောက်နဲ့ အမျိုးသား...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး ရဲ့  စစ်အာဏာ...
ကျနော် ဆွဲဖွင့် မိသော တံခါးများ (အလွဲတွေနဲ့ နပန်း...
ရွှေခမောက်စာစောင် အမှတ်စဉ်( ၁၁၇ )
The Voice (6- 31 ) စာစောင်
မီဒီယာ အသစ်ကြောင့် မြန်မာ့အကြောင်း လူပိုသိလာ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၆၅)နှစ်ပြည်...
ယနေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြ...